December 2018 – Page4– HlaMin
Book (001) : Two Sermons
Sayagyi U Pe Maung Tin was Professor of Pali and Burmese. His students include ICS U Sein Tin (Theikpan Maung Wa) U Thein Han (Zawgyi) U Wun (Minthuwun) U Tha Win requested Sayagyi U Pe Maung Tin to translate into English the two sermons that Buddha gave to […]
RIT (017) : SDYF — A year ago
Wynn Htain Oo (M72) wrote : စွယ်တော်ရိပ်ဖောင်ဒေးရှင်းအောက်မှာဆရာများကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးရေးအဖွဲ့ငယ်တခုကိုမကြာသေးမီကဖွဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမေသက်လှိုင်နောက်ကိုသန်းဦးနောက်အခြားအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြုံးပြုံးဦးတို့ကြည်ကြည်ဝင်းတို့မူလအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆရာဆရာမမျာကိုဒီနှစ်အတွက်စစ်ဆေးပေးမှုစတင်နေပါပြီ တခုကိုမကြာသေးမီကဖွဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမေသက်လှိုင်နောက်ကိုသန်းဦးနောက်အခြားအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြုံးပြုံးဦးတို့ကြည်ကြည်ဝင်းတို့မူလအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆရာဆရာမမျာကိုဒီနှစ်အတွက်စစ်ဆေးပေးမှုစတင်နေပါပြီ ဒီအစီအစဉ်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှကျောင်းသားဟောင်းဦးသောင်းစိန်က၂၀၀၄ခှုနှစ်WWSPZPလာရောက်စဉ်အသက်၆၅နှစ်နဲ့အထက်အကျုံးဝင်သောဆရာဆရာမကြီးကြီးများကိုဆေးစစ်ပေးဖို့ရန်ပုံငွေထူထောင်ပေးရာကစပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းခိုင်(ယခုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး)ကကမကထလုပ်ပြီးဒီအမှုကို၂၀၀၄မှ၂၀၁၆အထိပြုံးပြုံးဦးကိုသန့်ဇင်ကိုလှဝင်းတို့အပါအဝင်ကျောင်းသားဟောင်းတွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် အခုဆိုဆရာများစောင့်ရှောက်ရာမှာစွယ်တော်ရိပ်ဖောင်ဒေရှင်းခိုင်မာစွာပေါ်ပေါက်လာပြီဖြစ်လို့မနစ်ကကိုဝင်းခိုင်ကဒီလုပ်ငန်းကိုစွယ်တော်ရိပ်ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရန်ပုံငွေနဲ့တကွလွှဲအပ်ဖို့အဆိုပြုတဲ့အခါစွယ်တော်ရိပ်ကဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံခဲ့ပါတယ် အခုအဲဒီရန်ပုံငွေကရတဲ့အတိုးအပေါ်မှာစွယ်တော်ရိပ်မှထပ်ဆောင်းပြီး အခုဆိုအသက်၆၀ အထက်ဆိုရင်စစ်ပေးပါတယ်..၆၅နှစ်မဟုတ်တော့ပါဘူး (အကျုံးဝင်မှုအသက်လျောလို့ဆရာဆရာမအရေအတွက်ပိုမိုလာပါမယ်အကျုံးဝင်မှန်းမသိသေးသောဆရာများမေသက်လှိုင်ကိုဆက်သွယ်ပြီးဆေးစစ်မှုခံယူနိုင်ပါတယ်) မျက်စိကုသမှုကိုလဲဆရာဆရာမများသာမကဇနီးခင်ပွန်းအထိပါအခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ Editor’s Note: The eligibility rules may change depending on the availability of funds, and the number of eligible sayas and sayamas. SDYF (Swel Daw Yeik Foundation) provides medical checkup, but currently it […]
Pioneers (001) : Burmese Female Scholars
By Hla Min (Lifelong Learner) on December 11, 2018 • ( 1 Comment )
For archive (Updated on February 12, 2019) The list is partly based onaspecial broadcast by BBC, which covered the early Burmese female scholars that studied for their Masters and Doctorates (mostly in the UK and the US). Additional details are provided by friends and relatives (including […]
Notes (008) : San Shwe Myint
San Shwe Myint isacharacter from Cartoon Myint Thein, who isaMaya Nyi Ah Ko of Ko La Min (EP70). Their spouses are twins. An article appeared in News Watch Weekly in 26th November, 2013 (See photo and caption posted by Dr. Nyunt Wai [SPHS63]) ကာ […]
Months (011) : November
November was the 9th month of the old calendar. “Nov” means nine. November became the 11th month of the new calendar. It contains the Anniversary of my beloved parents. Deepavali (Diwali) and Tazaundaing (both Festival of Lights) fall around November. Kathein robe offering usually falls around late October […]
RIT (028) : U San Lin
U San Lin (Maung Lu Pay, M87) has consolidated the postings by Nan Khin Nwe and me. Feel free to share. ဂျီဟောအကြောင်း အမှတ်တရ တချိန်သောအခါက အာအိုင်တီကျောင်းတော်မှာ ပညာသင်ကြားကြသော ပျိုပျိုမေကျောင်းသူတွေ ခိုနားရာအဆောင်လေးကို ဂျီဟော(G Hall) ဟူ၍ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ထိုဂျီဟောဆောင်မှ အင်ဂျင်နီယာပျိုမေများကား အခုအချိန်တွင် အင်ဂျင်နီယာအန်တီကြီးတွေ အန်တီလေးတွေ ဖြစ်နေကြပေပြီ။ ထိုပျိုမေများကို ဂျီဟောသူဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါ၏။ ဂျီဟောဆောင်သည် ဗမာ့စက်မှုတက္ကသိုလ် BIT(Burmese Institute of Technology) ခေတ်အခါက ဆရာအချို့၏ခိုနားရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ […]
Poem (012) : I am not what you see or think
By Soe Snu ငါဟာလေ…G hall သူ မင်းပြောဖူးတယ်ငါ့ကိုပဲ…… ပါးစပ်ကကြမ်းနှုတ်သရမ်းနဲ့မုဆိုးတပိုင်းမိန်းမရိုင်းတဲ့ မျက်နှာထားကဆိုးမာနမိုးထိုးကြည့်ရင်းနဲ့တောင်ကြောက်သတဲ့ တကယ်ဆိုရင်မွန်မြတ်စိတ်ထားနူးညံ့နှလုံးသားအားမင်းမမြင်ခဲ့ပါလေ တကယ်ဆိုရင်ငါ့ဘဝမှာချမ်းသာတာဆိုလို့မာနပဲရှိတဲ့ဘဝသမားတယောက်ဆိုတာမင်းသိပါစေချစ်မိတ်ဆွေ….. Ssn
RIT (041) : Micro gathering in Los Angeles
Saya Dr. Tin Win and Lily Ko Tun Aung (Jeffrey) and Ma Thuzar Lin Three-car Shin Laung Hlairt Posting : Thuza (Former Movie Star. Still beautiful & healthy despiteavoracious appetite) တခါတခါကျတော့လဲ ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲ မနက်ဖန်အားလား အားရင်လိုက်ခဲ့ပါလား ဆိုင်လေးတဆိုင်တွေ့ထားလို့ဆိုပြီး အစားတူတဲ့သူတွေ စုပြီးဝိုင်းဖွဲ့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆရာဦးတင်ဝင်းနဲ့လီလီရယ် လင်းရယ်က သူဇာတ်ု့နဲ့အစားညီတယ်။ Jeffrey ကလဲသူ့ဆရာတွေများကျွေးရမယ်ဆိုထိပ်ဆုံးကဆိုတော့ ပေါင်းမိကြတာပေါ့နော်။ အဲ့ဒီဆိုင်လေးက ကြိုက်တဲ့ဟင်းလက်ညှိုးထိုးမှာပြီး ဆန်ပြုတ်နဲ့သောက်ရတာ။တမျိုးလေး […]
Poem (013) : FromaG-Hall pal
“The hand that rocked the cradle rules the world.” A December dream (or nightmare) by Ko Myint Oo. —————————————————————— Posting : Nan Khin Nwe G hall သူများတွေ့ဆုံပွဲ အတွက် အမှတ်တရ ကဗျာ (၄) အကို Ko Myint Oo ရဲ့လက်ရာပါ သူကG hall သားမို့ ရေးချက်တွေကထိမိလိုက်တာနော် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် . “#အိုဘယ့်ဂျီဟောသူ “ . . ပုခက်လွှဲဖို့ထက် ကမ္ဘာကို […]
Notes (017) : Young and Crazy
Young and crazy team from Pearl Island four decades ago Dr. Nyan Taw (Dicky, SPHS63), Soe Nyunt, … Posting : Soe Nyunt